108 chalcedonyBead chalcedonyMalaMala chalcedonyor chalcedonyBuddhist chalcedonyprayer chalcedonybeads, chalcedonyare chalcedonya chalcedonytraditional chalcedonytool chalcedonyused chalcedonyto chalcedonycount chalcedonythe chalcedonynumber chalcedonyof chalcedonytimes chalcedonya chalcedonymantra chalcedonyor chalcedonythe chalcedonyname chalcedonyor chalcedonynames chalcedonyof chalcedonya chalcedonydeity chalcedonyis chalcedonyrecited chalcedonywhile chalcedonymeditating. chalcedonyThe chalcedonymala chalcedonyis chalcedonyused chalcedonyso chalcedonythat chalcedonyone chalcedonycan chalcedonyfocus chalcedonyon chalcedonythe chalcedonymeaning chalcedonyor chalcedonysound chalcedonyof chalcedonythe chalcedonymantra chalcedonyrather chalcedonythan chalcedonycounting chalcedonyits chalcedonyrepetitions. chalcedonyThey chalcedonyare chalcedonysimilar chalcedonyto chalcedonyother chalcedonyforms chalcedonyof chalcedonyprayer chalcedonybeads chalcedonyused chalcedonyin chalcedonyvarious chalcedonyworld chalcedonyreligions. chalcedony chalcedonyThey chalcedonyare chalcedonyusually chalcedonymade chalcedonyfrom chalcedony108 chalcedonybeads, chalcedonythough chalcedonyother chalcedonynumbers, chalcedonyusually chalcedonydivisible chalcedonyby chalcedony9, chalcedonyare chalcedonyalso chalcedonyused. chalcedony(Malas chalcedonyare chalcedonytypically chalcedonymade chalcedonywith chalcedony19, chalcedony21, chalcedony27, chalcedony54 chalcedonyor chalcedony108 chalcedonybeads.) chalcedonyMala chalcedonyis chalcedonyhandmade chalcedonyand chalcedonyknotted chalcedonybetween chalcedonyeach chalcedonybead chalcedonyand chalcedonyfinished chalcedonywith chalcedonya chalcedonyhandmade chalcedonytassel. chalcedonyRuby chalcedonyZoisite chalcedonyand chalcedonyPink chalcedonyJade chalcedonyChalcedony. chalcedonySilver chalcedonymarkers chalcedonyand chalcedonyGuru chalcedonybead. chalcedonyFinished chalcedonywith chalcedonya chalcedonyhandmade chalcedonytassel.Ruby chalcedonyin chalcedonyZoisite chalcedonyis chalcedonyan chalcedonyenergy chalcedonyamplification chalcedonystone chalcedonythat chalcedonycan chalcedonyenergize chalcedonythe chalcedonyentire chalcedonyfield chalcedonyof chalcedonyone\_u2019s chalcedonybody. chalcedonyIt chalcedonyincreases chalcedonyones chalcedonyawareness chalcedonyof chalcedonyindividuality chalcedonyand chalcedonyhelps chalcedonyto chalcedonycalm chalcedonyobsessive chalcedonyfeelings chalcedonytowards chalcedonyanother chalcedonyperson. chalcedonyIt chalcedonyhas chalcedonybeen chalcedonyknown chalcedonyto chalcedonybe chalcedonyused chalcedonyfor chalcedonymending chalcedonybroken chalcedonyhearts. chalcedony chalcedonyUse chalcedonyit chalcedonyto chalcedonyincrease chalcedonyphysical chalcedonyvitality.Pink chalcedonyChalcedony chalcedonyencourages chalcedonylove, chalcedonysympathy chalcedonyand chalcedonykindness chalcedonyand chalcedonyall chalcedonygood chalcedonyqualities.\_u00a0 chalcedonyBrings chalcedonyout chalcedonya chalcedonysense chalcedonyof chalcedonychildlike chalcedonywonder chalcedonyand chalcedonywillingness chalcedonyto chalcedonylearn chalcedonynew chalcedonythings. chalcedonyIt chalcedonyis chalcedonya chalcedonycreative chalcedonystone chalcedonythat chalcedonyencourages chalcedonystory chalcedonytelling. chalcedonyPink chalcedonychalcedony chalcedonyis chalcedonya chalcedonyspiritual chalcedonystone chalcedonythat chalcedonyencourages chalcedonyempathy chalcedonytoward chalcedonyothers chalcedonyand chalcedonyinner chalcedonypeace. chalcedonyIt chalcedonyhelps chalcedonypeople chalcedonywith chalcedonytrust chalcedonyissues.\_u00a0(#17)